China High Yakachena Graphite Moulds fekitari uye vagadziri | Jitai
Chinyakare chinoumbwa neforoma zvinowanzo gadzirwa nesimbi. Nekudaro, kubva pakuona kwekuumbwa uye kuumbwa kwavo mhando idzi dzeforoma dzinoomerwa nekutora zvimiro zvakaoma uye kushanda nezvinhu zvinoumbwa. Uyu ndiwo mhedzisiro yekusawirirana kwekupisa kwekuwedzera kwekuwedzera pakati peforoma pachayo uye nezvinhu zvakaiswa mukati. Naizvozvo, graphite yakabuda seyekutanga sarudzo yekugadzira chakuvhuvhu nekuda kwechimiro chayo chaunoda panyama nemakemikari. Jitai inotengesa yakakura kwazvo yakasarudzika tsika yakachena yakachena graphite molds iyo inogona zvakanyanya kudzikamisa iyo yega-chikamu mutengo wevatengi vedu.
Graphite imhando yekristaro yechinhu kabhoni ine zvinotevera hunhu:
1. Kwakanaka kupisa uye magetsi kuitisa;
2. Kusagadzikana nemakemikari ngura uye hazviite nyore nemhando dzakasiyana dzesimbi
3. Yakadzika yekupisa yekuwedzera yekukosha uye yakanaka yekupisa kugadzikana
4. Kwakanaka lubrication uye kupfeka kuramba
5. Inoita mushe pakupisa kwakanyanya (yakawanda yemhangura simbi matrix sintering tembiricha iri pamusoro pe800 ℃). Simba rinowedzera pamwe chete nekuwedzera kwetembiricha
6. Kugadzirwa kwemuchina kwakanaka, kunogona kushandiswa kuumbwa nemaumbirwo akaomarara uye mumamiriro ezvinhu akakosha chaizvo.
1.Used yekuenderera uye semi-kuenderera kukanda kweasina-ferrous simbi. Nekuda kweiyo yakanaka yekupisa yekudziya uye yekuzvizora yega mhando yezvinhu, saizi yeiyo ingot inoramba iri chaiyo, iyo nzvimbo inoramba yakatsetseka, uye yayo yekristallini chimiro inogara yunifomu kunyangwe mushure meakawanda firings. Izvi zvinobvumidza kuwedzera kukanda kumhanya, kuve nechokwadi chekuti inotevera maitiro anogona kutanga nekukurumidza kunotevera. Izvi zvinowedzera zvakanyanya chiyero chegoho uye mhando yechigadzirwa.
2. Moulds yekumanikidza kukanda: Chakagadzirwa graphite yakashandiswa zvinobudirira kumanikidza kukanda kweasina-ferrous simbi. Semuenzaniso, zinc alloy uye mhangura alloy castings inogadzirwa nekumanikidza kukanda maumbwe eyakagadzirwa graphite zvinhu anowanzo shandiswa mumotokari zvikamu.
3. Graphite anoumba kuti centrifugal Kudzingwa: Graphite anoumba kunge vakabudirira kushandiswa mune centrifugal Kudzingwa. Makambani eUS akashandisa chakaumbwa graphite molds ine rusvingo ukobvu hunopfuura 25mm kusvika centrifugally kukanda bhuronzi bushes, bushings, uye maoko.
4.Kupisa kudzvanya mafuru: Iyo yekugadzira graphite inoshandiswa mune inopisa yekumanikidza mafuru ine maviri maitiro ekudzvinyirira sintering yeakaomeswa carbides:
A) Kana iyo tembiricha panguva yekutsikirira yakawedzerwa kusvika 1350 kusvika 1450 ℃, inodiwa yeyuniti yekumanikidza inogona kudzikiswa kusvika pa1 / 10th yezvaizodikanwa kana chando chaitonhora.
B) Kumanikidza uye kudziyisa kunoitwa panguva imwe chete, uye muviri wakafuta sintered unogona kuwanikwa mushure menguva pfupi chete yekunyungudika.
5.Molds yegirazi kuumbwa: Graphite zvinhu zvazova zvakakosha muforoma zvinhu zvekushanda negirazi. Inogona kushandiswa kugadzira kuumbwa kwegirazi machubhu, magokora, fanera uye akasiyana mamwe mafomu.
6. Sintering anoumba uye mamwe madhaimani sintering anoumba: Nemhaka yakaderera tembiricha kuwedzera chakagadzirwa graphite, sintering anoumba uye mumabhuraketi kuti transistors zvinogona kugadzirwa. Ikozvino yave kushandiswa zvakanyanya uye chave chinhu chakakosha zvinhu mukuvandudza kweiyo semiconductor indasitiri.
Performance kuenzanisa kwezvinowanzo shandiswa muforoma kugadzira zvinhu uye zvinoumbwa nezvinhu
Thermal Kuwedzera Coefficient
Carbon Fibha / Epoxy
Girazi Fibha / Epoxy